Ra’iisal-Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo dafiray waxay Somaliland qabsatay | Somaliland.Org
February 27, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Cabdirisaaq Xaaji Xusseen oo mar Raysul-wasaare ka ahaa Soomaaliya, ayaa markii u horaysay ka hadlay aqoonsi Somaliland ka hesho beesha caalamka.
Cabdirisaaq Xaaji Xusseen oo ay shalay waraysi dheer la yeelatay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-du, waxa uu si is burinaysa uga hadlay waxyaabaha ay Somaliland qabsatay 19-kaa sannadood ee ay jirtay.
Waxa uu sheegay in Somaliland iyo maamul-gobolleedka Puntland oo uu ku lamaanaysiiyay ay qabsadeen nabadgelyo, isla markaana aanay wax dhibaatooyin ahi ka dhicin tobanaankii sannadood ee u dambeeyay, halka Koonfurta Soomaaliya ay muddo labaatan sannadood ah dhibaatooyin xididaystay ka taagan yihiin.
Hase yeeshee, waxa uu tilmaamay in Somaliland doorashooyin dhawr ah oo hab Dimoqraadi ah u dhacay qabsatay, haddana waxa uu sheegay in marka nabadda laga tago, aanu garanaynin wax gaar ah oo horumar ah oo ay ku talaabsadeen. “Puntland iyo waddankan Somaliland la yidhaahdoo, anigu hadda waxaan u aqaan Waqooyigee, labadan wadan in muddo ah waxay isku talis gooni ah ayay wateen ilaa dagaalkii sokeeye intii uu ku dhacayay, horta dhinaca Puntland ilaa hadda waligood dagaal micno lahoo wax ka dhaca oo qof qof la dilay wax dhaafsiisani kama dhicin,” ayuu yidhi. “Dhinaca Somaliland ama Waqooyiga bilawgii Maxamed Siyaad Barre meesha ka tagay dagaalo waxoogaya ayaa ka dhacay sannadihii u dambeeyay. Laakiin, sidii shirkii Boorama loo fadhiistay oo go’aanka dhisku socday lagu gaadhay intii ka dambaysay xasilooni fiican ayaa ka jirta imika dhinaca waqooyiga is-doorashooyin baa laga sameeyey, siday u dhaceen haddaad fiirisid inkastoo wax layska sheeg sheegayo, guud ahaan taasoo u ekayd nidaam fiican oo dimoqraadi ah inuu yahay. Markaa labadan waddan adigu wax weyn oo hada ay qabteen oo ka duwan nabada guud ahaan la odhan karayo kor u kac, kana dhacay oo hada aanu farta ku fiiqi karo hada ma jiro,” ayuu raaciyay Cabdirisaaq Xaaji Xusseen. Laakiin, waxa uu farta ku fiiqay muhiimada nabaddu leedahay oo uu xusay inay tahay wax aan la quudhi karin.
Cabdirisaaq Xaaji Xusseen oo Raysal-wasaare ka ahaa Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed sannadihii 1964-67, waxa uu ka dayriyay xaalada xilligan ee Soomaaliya. “Waxaan leeyahay; waar dagaalada joojiya,” ayuu yidhi.
Mar la waydiiya sida uu u arko in Somaliland loo aqoonsado dal madaxbanaan, waxa uu sheegay in taasi horseedi doonto in dalal badan oo Afrikaan ahi kala jajabaan.
Sidaa aawadeed, waxa uu ku dooday in aanu jirin sabab talaabadaas loo sameeyaa, iyadoo dawladda Afrikaanka ahi ee ku talaabsadana uu uga digay in bulshadeedu kala qaybsami doonto. “Dawladda sidaa samayn kartaa waa tee? Sow gobol kastaaba inuu gaar noqdo ku doodi maayo,” ayuu yidhi.
Mar uu ka hadlayay geedi-socodkii dawladnimada Soomaaliya laga soo bilaabo Midowgii 1960-kii, waxa uu difaacay siyaasadii hoggaamiyeyaasha beeshiisu ku lahaayeen kala qaybsanaantii siyaasadeed iyo burburkii Soomaaliya.
Previous PostQaban-qaabada Caleemo-saarka Ugaaska Beesha Ciisaha ee maalinta Isniinta oo ka socota SaylacNext PostXukuumaddu maxay ka tidhi in Ciidamo Jabuuti leedahay la wareegeen Magaalada Saylac?	Blog